Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Maninona ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Polokashvili no tsy voafidy araka ny tokony ho izy?
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Espaniola • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Rehefa afaka 4 taona dia mazava fa tampoka fa tsy mety ny fifidianana ny sekretera jeneraly UNWTO 2017. Zurab Pololikashvili dia tsy tokony ho sekretera jeneraly ankehitriny. Mety hisy ny vintana amin'ny fivorian'ny General Assembly ao Maraoka ho avy izao dia azo ahitsy io lesoka io.
Misy dingana roa tokony harahina amin'ny fizotry ny fifidianana ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO, ary izy roa ireo dia tsy narahina tamin'ny 2017.
Ny dingana voalohany dia ny fifidianana nataon'ny UNWTO Executive Council izay natao tany Madrid tamin'ny 10 May 2017. Voahitsakitsaka ny lalàna mifehy ny lalàna sy ny fomba fanao napetraka ho an'ireo fikambanana.
NY DINGANA FAHAROA: Ny andininy faha-22 amin'ny lalàna mifehy ny fikambanana dia manambara: "Ny sekretera jeneraly dia eken'ny roa ampahatelony ny ankamaroan'ny mpikambana feno dia tonga ary mifidy ao amin'ny Antenimiera noho ny tolo-kevitry ny filankevitra mandritra ny efa-taona… ” ( 'mpikambana feno»Dia midika hoe fanjakana ambony. Voahitsakitsaka mazava ny lalàna mifehy ny lalàna sy ny fanao napetraka ho an'ny fikambanana.
Ny tolo-kevitry ny fivorian'ny UNWTO Executive Council faha-105 nanolorana an'i Andriamatoa Zurab Polokashvili avy any Georgia ho sekretera jeneraly handimby an'i Dr. Taleb Rifai avy any Jordania dia tokony ho tsy manan-kery satria nohitsakitsahina tamin'ny fomba ratsy ireo fomba fanao sy lalàna mifehy. Ny mpanolotsaina ara-dalàna sy mpisolovava an'ny UNWTO, Ramatoa Gomez, dia nanoro hevitra an'i Dr. Taleb Rifai izay niantehitra tamin'ny fanombatombanana azy.
Ny fanamafisana ho an'Andriamatoa Pololikasvili tao amin'ny Fivoriamben'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Iraisam-pirenena XXII natao tany Chengdu, Sina ny 13-16 septambra 2017 tamin'ny alàlan'ny fanambarana dia tsy mitombina ary voahitsakitsaka mazava tsara ny lalàna napetraka miankina amin'ny fanambarana ratsy ataon'ny mpisolovava sy mpanolotsaina UNWTO Ramatoa Alicia Gómez
Ramatoa Alicia Gómez dia mbola miasa ao amin'ny World Tourism Organization amin'ny maha mpanolotsaina ara-dalàna azy ary nisondrotra tamin'io toerana tsara kokoa io fotoana fohy taorian'ny nitondran'Andriamatoa Pololikasvili tamin'ny janoary 2018.
Malaza sy zokiolona eTurboNews loharanom-pahalalana tena mahalala ny olana dia namakafaka ny fanazavana nataon'ny Profesora Alain Pellet, mpanolotsaina ara-dalàna an'ny UNWTO.
Ny fanazavan'i Pellet ny maha-marim-pototra ny adihevitra iray momba ny tolo-kevitry ny firenena iray mpikambana ao amin'ny UNWTO dia manazava ny toe-javatra nisy ny kandidà mpifaninana Alain St. Ange.
Mandritra izany fotoana izany, Alain St.Ange nahazo valisoa mihoatra ny iray tapitrisa Rupee Seychelles noho ny fanesorana diso tamin'ny fifidianana UNWTO. Ny fanesorana azy dia nanampy mazava an'i Andriamatoa. Pololikasvili handresy.
Araka ny notaterin'ny eTurboNews tao anatin'izay 4 taona lasa izay, misy olana maro hafa tsy ara-dalàna izay nantsoin'ity publication ity hoe hosoka, fanodinkodinana ary maro hafa.
Misy ny fotoana farany hanitsiana ny sasany amin'ireo lesoka.
Ny maso rehetra dia mijery ny fivorian'ny General Assembly ao Marrakesh, Morocco amin'ny faran'ny volana novambra.
Ahoana ny fomba tsy narahina tamin'ny dingana mandat amin'ny fifidianana tamin'ny 2017?
Araka ny voalaza etsy aloha, misy dingana roa amin'ny fizotry ny fifidianana ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO
Ny iray amin'ireo dingana roa amin'ny fifidianana ireo dia tsy narahina araka ny lalàna mifehy ny lalàna sy ny fomba efa napetraky ny fikambanana.
Ity no fomba.
Tolo-kevitry ny Executive Council
Ny lalàna 29 amin'ny Fitsipika momba ny lalam-panatanterahana ny filankevitra mpanatanteraka dia milaza fa ny tolo-kevitry ny olona voatendry amin'ny toeran'ny sekretera jeneraly dia atao amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina sy ny latsa-bato isan'ny maro an'isa mandritra ny fivoriana tsy miankina an'ny filankevitra.
Ilay fitenenana hoe "maro an'isa tsotra, ” izay mety hamitaka, dia faritana amin'ny isa dimampolo miampy iray amin'ireo bileta (raha misy isa hafahafa, ny isa ambony noho ny antsasaky ny vato) alohan'ny mpikambana ao amin'ny Filankevitra manatrika sy mifidy.
Hoy ny lalàna: “raha tsy misy mpifaninana mahazo ny maro an'isa amin'ny latsa-bato voalohany, iray segondra ary raha ilaina dia hisy ny bileta hafa hanapahana hevitra eo amin'ireo kandidà roa mahazo vato betsaka kokoa amin'ny vato voalohany. ”
Raha misy mpifaninana roa mizara ny toerana faharoa dia mety ilaina ny bileta fanampiny iray na maromaro hamaritana hoe iza ireo kandidà roa handray anjara amin'ny latsa-bato farany.
Tamin'ny 2017, rehefa nisy kandida 6 nilatsaka (aorian'ny 7th ny iray avy any Armenia dia nandao), ny fifidianana dia nofaranana tamin'ny latsa-bato faharoa.
Nandresy an'Andriamatoa Walter Mzembi avy any Zimbabwe Andriamatoa Pololikashvili.
Tamin'ny latsa-bato voalohany dia ny valiny dia: Andriamatoa Jaime Alberto Cabal (Kolombia) tamin'ny vato 3, Ramatoa Dho Young-shim (Repoblikan'i Korea) tamin'ny vato 7, Andriamatoa Marcio Favilla (Brezila) tamin'ny vato 4, Andriamatoa Walter Mzembi manana vato 11, ary Andriamatoa Zurab Pololikashvili tamin'ny vato 8.
Tamin'ny latsa-bato faharoa dia nahazo vato 18 Andriamatoa Pololikashvili ary Andriamatoa Mzembi 15. Andriamatoa Alain St.Ange avy any Seychelles dia nisintona ny filatsahany avy hatrany talohan'ny fifidianana.
Iza no mety ho kandidà ho an'ny Sekretera jeneralin'ny UNWTO?
Raha te-ho mpilatsaka ho fidiana ho sekretera jeneralin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany dia tsy maintsy manatanteraka fepetra isan-karazany ianao ary manaraka ny fomba fanao iray izay voafaritra nandritra ny taona maro, ny taona 1984 ka hatramin'ny 1997.
Tokony ho olom-pirenenan'ny mpikambana iray ianao ary ity fanjakana ity dia tsy tokony hanangona arara tsy voamarina amin'ny fandraisany anjara.
Ny fifidianana ny sekretera jeneraly dia fifaninanana eo amin'ny isam-batan'olona fa tsy amin'ireo firenena. Na izany aza tsy misy afaka mihazakazaka amin'ny diany manokana.
Ireo kandidà dia tsy maintsy aseho amin'ny alàlan'ny fahefan'ny fanjakana mpikambana (filoham-panjakana, lehiben'ny governemanta, minisitry ny raharaham-bahiny, ambasadaoro mahay…).
Ity anjara asan'ny "sivana" ity dia tsy tokony horaisina ho toy ny fanekena, fanohanana, na koa tolo-kevitra navoakan'ny governemanta, satria diso fanonona matetika ao amin'ny famoahana gazety sasany na antontan-taratasy UNWTO.
Zava-dehibe ny teny: tolo-kevitra tsotra izao.
Ny fanapaha-kevitra CE / DEC / 17 (XXIII) noraisin'ny Filankevitra Mpanatanteraka tamin'ny fotoam-pivoriana faha-1984, 23, izay nametraka ny fomba narahina hatramin'izao dia milaza hoe: “ny mpilatsaka hofidina dia hatolotra ara-dalàna amin'ny filankevitra amin'ny alàlan'ny Sekretariat avy amin'ny governemanta any amin'ny fanjakana izay zom-pireneny… ”
Tsy misy ny mombamomba ny kandidà sy ny firenena: tsy misy andinin-tsoratra masina hanery ny governemanta handefa kandidà roa na roa.
Raha vao misy ny filatsahan-kofidina dia ampitaina amin'ny alàlan'ny fehezanteny fanamarihana ataon'ny Sekretera amin'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana.
Rehefa tonga ny fe-potoana ahazoana kandidà (matetika roa volana alohan'ny fotoam-pivoriana), dia misy antontan-taratasy nomanin'ny sekretera ary alefa amin'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevitra milaza ny lisitr'ireo kandidà farany, ary mampita ireo antontan-taratasy izay tokony omen'ny tsirairay avy (taratasy ny tolo-kevitra avy amin'ny governemantany, vita vita amin'ny fandaharam-pianarana, fanambarana momba ny tanjon'ny politika sy ny fitantanana, ary vao haingana, mari-pahaizana momba ny fahasalamana).
Miorina amin'ny fototr'ity antontan-taratasy ity, izay mampatsiahy ihany koa ny fomba tokony harahina, ny fanapahan-kevitry ny Filan-kevitra mpanatanteraka hanolotra olona voatendry ho ao amin'ny Antenimiera.
Tsy hita na aiza na aiza ny lisitra ofisialin'ny kandidà farany izay efa nampitaina dia azo ovaina amin'ny dingana manaraka.
Na izany aza, ny antontan-taratasy CE / 112/6 REV.1 navoaka tamin'ny taona 2020 ho fitarihana ny fifidianana ny sekretera jeneraly mitohy ho an'ny vanim-potoana 2022-2025 dia manondro tampoka fa "Ny fanamafisana ny filatsahan-kofidina ataon'ny governemanta amin'ny fanjakana mpikambana dia fepetra takiana lehibe ary ny fisintotany izany dia hiteraka fanilihana ny kandidà na ilay voatendry.. "
Ity fiheverana ity dia famoronana madio avy amin'ny Sekretariat ankehitriny an'ny andrimpanjakana.
Ny mety hisintona ny tolo-kevitry ny governemanta (fa tsy “mpanohanat, ”araka ny efa nanondroana azy teo aloha, dia tsy vokatry ny andinin-tsoratra masina na ny fanapahan-kevitry ny fikambanana - Filankevitra sy Fivoriambe - tafiditra ao anatin'izany.
Ny fiheverana miavaka fa ny olom-boafidy dia mety ho disqualifié ao anatin'ny fizotry ny fifidianana, toe-javatra iray izay mametraka lozisialy tolo-kevitra vaovao navoakan'ny Filankevitra amin'ny fotoam-pivoriana manaraka, dia tsy voadinika - ary misy antony marim-pototra! -
tsy ao amin'ny Statutes na amin'ny Fitsipika momba ny lamina an'ny fikambanana roa voarohirohy.
Ilay fiheverana voalaza momba ny mety hisian'ny governemanta hanala ny tolo-keviny eo afovoan'ny fizotrany dia tsy hita tao amin'ny antontan-taratasy CE / 84/12 navoaka tamin'ny 2008 mba hitarika ny fifidianana ilay teo alohan'ilay sekretera jeneraly ankehitriny ho an'ny vanim-potoana 2010 -2013, na ao amin'ny antontan-taratasy CE / 94/6 navoaka tamin'ny 2012 ho an'ny vanim-potoana 2014-2017.
Ny tena zava-dehibe dia ny tsy fisian'ny antontan-taratasy CE / 104/9 navoaka tamin'ny 2016 mba hifehezana ny fizotry ny fifidianana amin'ny vanim-potoana 2018-2021.
Ity lahatsoratra ity sy ny fanapahan-kevitry ny filankevitra mifandraika izay nifehy ny fifidianana tamin'ny 2017. Ny zava-misy fa efa-taona taty aoriana dia nisy fiheverana vaovao, mifanohitra amin'ny fahatakarana mialoha ny fomba fanao, nampidirina, toa tsy mitombina hanamarinana ny lesoka natao tamin'ny 2017 tamin'ny fanendrena ny sekretera jeneraly ankehitriny.
Ny filaharan'ny ady hevitra novolavolaina tetsy ambony, izay tsy misy toerana ao amin'ny lahatsoratra UNWTO sy ny fomba fanafoanana ny tolo-kevitry ny governemanta ho an'ny sekretera jeneraly, nohamarinin'ny profesora ao amin'ny Oniversite, filoha teo aloha an'ny Fitsarana Iraisam-pirenena an'ny UN Justice, izay mpanolotsaina ara-dalàna an'ny fikambanana nandritra ny 30 taona, ary mpanampy azy ny mpanolotsaina ara-dalàna ankehitriny.
Araka ny eTurboNews fikarohana izay nanazava ny sarivongana dia Alain Pellet. Mpisolovava frantsay izy izay mampianatra lalàna iraisam-pirenena sy lalàna iraisam-pirenena momba ny toekarena ao amin'ny Université de Paris Ouest - Nanterre La Défense. Izy dia talen'ny Centre de Droit International (CEDIN) an'ny oniversite teo anelanelan'ny 1991 sy 2001.
Pellet dia manam-pahaizana frantsay amin'ny lalàna iraisam-pirenena, mpikambana ary filoham-pirenena teo aloha ao amin'ny Vaomieran'ny Firenena Mikambana momba ny lalàna iraisam-pirenena, ary mpanolotsaina ho an'ny governemanta maro, ao anatin'izany ny Governemanta frantsay eo amin'ny sehatry ny lalàna iraisam-pirenena. Izy koa dia manam-pahaizana momba ny komitin'ny Badinter Arbitration Committee, ary koa rapporteur an'ny Komitista frantsay Jurist momba ny famoronana tribonaly heloka bevava iraisam-pirenena ho an'i Yogoslavia teo aloha.
Mpanelanelana na mpanolotsaina ary mpisolovava izy tamin'ny raharaha mihoatra ny 35 teo anoloan'ny Fitsarana Iraisam-pirenena ary nandray anjara tamin'ny arbitrations iraisam-pirenena sy iraisam-pirenena (indrindra amin'ny sehatry ny fampiasam-bola).
Pellet dia nampifandraisina tamin'ny fivadihan'ny World Tourism Organization (WTO) ho masoivohon'ny ONU, ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany manerantany (UNWTO).
Io fandikana io ihany no mifanaraka amin'ny fitsipika fototra voalaza ao amin'ny andininy faha-24 amin'ny lalàna, fa amin'ny fanatanterahana ny asany dia mahaleo tena ny sekretera jeneralin'ny UN World Tourism Organization, ary koa ny mpikambana rehetra ao amin'ny staff. ary tsy mahazo torolàlana avy amin'ny governemanta, anisan'izany ny azy. Izay azo ampiharina amin'ny fitantanana ny andrim-panjakana dia mifandraika, mutatis mutandis, ho an'ny fanahy hitarika ny fanondroana.
Tamin'ny taona 2017, tsy noraharahaina ity fitsipika fototra ity.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, kandida afrikanina roa no nifaninana tamin'ny toeran'ny sekretera jeneraly: Andriamatoa Walter Mzembi avy any Zimbabwe sy Andriamatoa Alain St.Ange of Seychelles.
Tamin'ny hetsika tsy mbola fahita tao amin'ny tantaran'ny UNWTO, ny volana Jolay 2016, napetraka teo amin'ny sehatra politika io raharaha io, niaraka tamin'ny fanapahan-kevitry ny Vondrona Afrikanina ary neken'i Seychelles, hanohana ny kandidà avy any Zimbabwe.
Tsy nisy mihitsy fikambanana iraisam-pirenena niditra an-tsehatra tamin'ny fomba tsy mendrika tamin'ny raharaham-bahiny ao amin'ny World Tourism Organization.
Tamin'ny 8 Mey 2017, andro vitsivitsy talohan'ny fivoriana tao Madrid an'ny Executive Executive, ny Governemanta Seychelles dia nahazo fehezan-teny avy amin'ny Vondrona Afrikanina nangataka ny firenena mba hisintona ny filatsahan'Andriamatoa St.Ange, iharan'ny sazy henjana avy amin'ny ny fikambanana sy ny mpikambana ao aminy.
Amin'ny maha-firenena kely azy dia tsy nanana safidy hafa i Seychelles afa-tsy ny nilefitra tamin'ilay fandrahonana, ary ny filohany vaovao dia nampandre ny sekretarian'ny fikambanana nandritra ny ora vitsivitsy talohan'ny nisokafan'ny fivorian'ny filankevitra momba ny fisintomana ny volavolan-kevitry ny kandidàny.
Mpikambana maro no nahita izany fiolahana izany vokatry ny fitsabahan'i Robert Mugabe, ny filohan'i Zimbabwe, izay nandao ny toeran'ny filohan'ny Vondrona Afrikanina ary "rain'ny fahaleovantenan'ny fireneny", teo am-panaovana fitaomana mahery amin'ny mpitondra afrikanina. Dr. Walter Mzembi dia minisitra tao amin'ny kabinetran'i Robert Mugabe.
Rehefa nampahafantarina ny fifindra-kevitry ny fireneny, ny Dr Taleb Rifai, ny sekretera jeneralin'ny UNWTO tamin'izany fotoana izany dia namporisihina hangataka ny torohevitr'i Ramatoa Alicia Gomez, mpanolotsaina ara-dalàna an'ny UNWTO.
Nampahafantarina azy fa Alain St.Ange dia tsy manan-jo hitazona ny tolotra nataony. Ny sekretera jeneraly Taleb Rifai dia mbola nanome ny fitenenana ao amin'ny fivorian'ny filankevitra talohan'ny datin'ny agenda momba ny fifidianana. Nanao lahateny mampihetsi-po i St.Ange ary niady hevitra ny amin'ny antony tokony hamelana azy hihazakazaka.
Noho ny antony novolavolaina teo aloha dia tsy maintsy dinihina fa tsy mety ny valin'ny mpanolotsaina ara-dalàna, tsy nohitsin'ny sekretera jeneraly.
Sarotra ny mahatakatra ny fomba mety nieritreretan'ilay sekretera jeneraly nivoaka tamin'izany fotoana izany, araka ny nambarany taty aoriana, fa ny fifidianana ho amin'ny fizotrany mazava izay andraikiny dia efa mahazatra.
Farafaharatsiny farafaharatsiny, misy fisalasalana mafy amin'ny fampifanarahana ny fizotran'ny fizotrany, ary tamin'io fotoana voalohany io no nitrangan'ity tranga ity.
Tokony apetraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny Filankevitra ny olana mba hahafahan'izy ireo manapa-kevitra momba ny fomba tokony harahina.
Izany no nataon'ny Lehiben'ny fivoriana faha-55 an'ny Executive Executive tamin'ny taona 1997 tany Manila rehefa nisy ny olana momba ny fandikana ny lalàna mifehy ny fifidianana.
Tamin'ny fanjavonan'ny kandidà Seychelles dia niova tampoka ny fifanarahana tamin'ny karatra.
Dokotera Mzembi irery sisa no kandida misolo tena an'i Afrika, ilay faritra manana vato betsaka indrindra ao amin'ny Filankevitra.
Izy no nitarika ny vato tamin'ny latsa-bato voalohany.
Na izany aza, mazava ho azy fa sarotra ho an'ny solontenan'i Zimbabwe ny voafidy ho lohan'ny andrimpanjakana iray ao amin'ny ONU raha toa ka voasazy avy amin'ny firenena maro ny firenena sy ny filohany, ao anatin'izany ny Etazonia sy ny mpikambana ao amin'ny Commonwealth sy ny Vondrona Eropeana, ary eo ambany tsikera avy amin'ny Security Council an'ny Firenena Mikambana.
Andriamatoa Pololikashvili dia nifidy tamin'ny faran'ny andro noho ny fandavana ny fametraham-pahatongan'ny kandidàn'i Zimbabwe.
Raha Andriamatoa Alain St.Ange, rehefa mody eto isika dia zony ny nanao izany, nihazona ny firotsahany hofidina, mazava ho azy fa hafa ny tantara.
Tamin'ny volana novambra 2019, ny Fitsarana Tampon'ny Repoblikan'i Seychelles dia nanaiky ny maha-ara-dalàna ny fangatahana nataon'Andriamatoa Alain St.Ange mifandraika amin'ny fanemorana ny volavolan-kevitry ny governemanta.
Nifanaraka tamin'ity didim-pitsarana ity dia nanapa-kevitra ny Fitsarana ambony tamin'ny Aogositra 2021 fa homena onitra i St.Ange noho ny vola naloany sy noho ny fahasimbana ara-pitondrantena nanjo azy.
Fifidianana tao amin'ny UNWTO General Assembly ao Chengdu, Sina 2017 - ny fanitsakitsahana faharoa:
Ny fepetra takin'ny andininy faha-22 amin'ny lalàna momba ny roa ampahatelon'ny maro ao amin'ny General Assembly amin'ny fanendrena ny sekretera jeneraly dia voalaza etsy ambony.
Araka ny lalàna 43 ao amin'ny Fitsipiky ny fomba fanao ao amin'ny General Assembly: “Ny fifidianana rehetra, ary koa ny fanendrena ny Sekretera jeneraly dia hatao amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina. "
Ny fanampim-panazavana amin'ny Fitsipika momba ny lamina dia mametraka ireo fitsipika mifehy hitarika ny fifidianana amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina, izay atao amin'ny alàlan'ny fampiasana taratasy fandatsaham-bato, ny mpikambana tsirairay dia manan-jo hifidy, ary antsoin'izy ireo tsirairay avy.
Raha mazava ny fotokevitra dia mampisy olana azo ampiharina ny fampiharana azy satria mandany fotoana be ny latsa-bato isam-bato amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina: farafahakeliny adiny roa no mety ho very ao anatin'ny fandaharam-potoana henjana ao amin'ny Antenimiera.
Noho izany, raha amin'ny fampiharana dia toa nisy ny marimaritra iraisana nipoitra teo amin'ireo mpikambana hanamarina ny safidin'ny kandidà natolotry ny Filankevitra Mpanatanteraka, ny Antenimiera dia afaka manapa-kevitra ny hanafoana ny lalàna misy amin'ny alàlan'ny latsa-bato miafina ary hiroso amin'ny fifidianana ampahibemaso. fiantsoana.
Ity fomba fiasa ity, nalaina tahaka tamin'ny fomba narahin'ny fikambanana iraisam-pirenena hafa, dia mitaky fepetra mialoha mialoha fa misy ny firaisan-kina eo amin'ny mpikambana amin'ny fanekena ny solony.
Raha tsy izany dia voahitsakitsaka ny fitsipiky ny lamina.
Noho izany, isaky ny fotoam-pivorian'ny Assembly, rehefa manomboka amin'ny fifanakalozan-kevitra momba ny fandaharam-potoana amin'ny fanendrena ny sekretera jeneraly, ny filohan'ny antenimieram-pirenena, mamaky ny taratasy nomanin'ny sekretera, dia mampahafantatra an'ireo mpikambana ny fomba fiasa araho, noraketina an-tsoratra tamin'ny fotoana maro ny fanendrena dia natao tamin'ny alàlan'ny fiantsoana, saingy nanitrikitrika fa raha misy mpikambana tokan-tena mangataka ny hifikitra amin'ny fepetra voafaritry ny latsa-bato miafina, ity dia mihatra amin'ny ara-dalàna.
Izany no nanombohan'ny dinika momba ny fifidianana ny sekretera jeneraly tamin'ny septambra 2017 tao amin'ny General Assembly natao tao Chengdu.
Natomboka tamin'ny famakiana ilay taratasy ny fanazavan'ny filoha ny fomba tokony hojerena. Taorian'ny fanontaniany raha misy mpikambana manohitra ny latsa-bato amin'ny alàlan'ny fiantsoana olona ary mangataka ny fitandremana fatratra ny lalàna, ny Lehiben'ny delegasion'i Gambia dia nangataka ny hanaovana ny valim-panadihadiana ary niantso ny latsa-bato miafina izy.
Tokony vita ny lalao, tokony hijanona eo ny adihevitra, ary tokony ho nanomboka ny fifidianana miafina.
Tsy izany no nitranga!
Solontena maro no nanao fitsabahana tamin-kafanam-po, na tamin'ny fanohanana ny latsa-bato tamin'ny alàlan'ny fiantsoana na niantso ny fanajana ny lalàna. Ny fanamafisana dia nangataka tamin'ny mpanolotsaina ara-dalàna sy ny sekretera jeneraly.
Raha tokony hilaza ny lalàna fotsiny izy ireo, ny resaka lava sy malalaka, ary, amin'ny farany, ny fanehoan-kevitra tsy misy dikany dia vao mainka nandoto ny adihevitra.
Nanjary henjana ilay resaka tsy nisy farany ary nanjary nisavoritaka ihany.
Mazava ho azy fa ny delegasiona manohana an'Andriamatoa Mzembi, indrindra ny Afrikanina, dia niezaka nahazo ny ampahatelon'ny vato ratsy, mba hanakantsakanana ny fifidianana ny olom-boatendry, ary hametraka fanendrena vaovao avy amin'ny Executive Council, ary ireo izay manohana tamin'ny fifidianana Andriamatoa Pololikashvili na natahotra ny mety ho fiverenan'ny kandidà Zimbaboeana dia nanitrikitrika ny filàn'ny latsa-bato amin'ny alàlan'ny fanambarana, “maneho ny firaisankinan'ny fikambanana. "
Raha ny zava-misy, noho ny tsy fahampian'ny fahalalàna ny fitsipika nataon'ny Lehiben'ny Governemanta, ny fitarihana tsy azo antoka avy amin'ny sekretera jeneraly, ary ny fahalemen'ny fanatanterahana ny mpanolotsaina ara-dalàna UNWTO MS Gomez dia atahorana tokoa ny firaisankinan'ny fikambanana amin'izany fotoana.
Ny sekretera jeneraly sy ny mpanolotsaina ara-dalàna dia afaka nahatsiaro fa ny dinika momba ny fomba fiasa dia nitranga nandritra ny 16 taonath fivorian'ny fivoriambe izay natao tamin'ny taona 2005 tao Dakar.
Toy ny tany Chengdu ihany, nanomboka ny adihevitra iray mahasosotra momba ny fifidianana amin'ny alàlan'ny fanentanana.
Toy ny tany Chengdu, solontena iray - Espana - no nanohitra, fa kosa ny delegasiona maro kokoa nangataka ny hanaovana ny fitenenana.
Niditra an-tsehatra ny sekretera jeneraly tamin'izany, izay nilatsaka hofidina, na dia tsy tombontsoany manokana izany, satria ny fifidianana amin'ny alàlan'ny fanambarana no fomba mora indrindra tsy hanoherana. Notsiahiviny ny lahatsoratry ny andininy faha-43 amin'ny Fitsipika momba ny laminasa ary nambarany mazava fa satria firenena iray tokana, dia i Espana, no nangataka latsa-bato miafina, vita ny dinika.
Ny latsa-bato mifidy miafina no nitranga, ary, nifandray tamin'izay, dia voafidy tamin'ny 80 isan-jaton'ny vato ny tompon'andraikitra.
Mikasika ny fifidianana ny sekretera jeneraly nataon'ny General Assembly, ny lahatsoratra UNWTO dia mamela toerana tsy hisalasalana, ary hatramin'ny 2017, ny fampiharana ny Institution dia nifanaraka tanteraka tamin'ireo lahatsoratra ireo.
Ny fifidianana tao Chengdu dia fotoana nampalahelo teo amin'ny tantaran'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany eran-tany.
Nandritra ny fiatoana tamin'ny adihevitra dia nifarana ny fifanarahana: ho takalon'ny fankatoavany ny vato amin'ny alàlan'ny fiantsoana, dia nisy iraka natolotra an'i Andriamatoa Walter Mzembi hametraka tolo-kevitra ho an'ny fanavaozana ny fomba fanendrena ny sekretera jeneraly - iraka izay, mazava ho azy, tsy nisy tohiny.
Andriamatoa Pololikashvili sy Andriamatoa Mzembi dia nidina teny ambony lampihazo noho ny tehaka sy ny feon-tsofin'ny ankamaroan'ny mpikambana, izay, segondra vitsy talohan'izay, dia nanitsakitsaka ny lalàna mifehy ny andrim-panjakana misy azy ireo na tsia.
Mikasika ny fifidianana ny olom-boatendry tao Madrid, raha nohajaina ny lalàna tamin'ny fifidianana tao Chengdu, dia mety ho hafa ny tantara sy ny tompon'andraikitra amin'ny UNWTO.
Ny tontolon'ny fizahan-tany dia mijery ny fivorian'ny UNWTO General Assembly izao hanitsiana ny toe-javatra, ary ho lasa mpilalao manerantany matanjaka indray ny fizahantany.
Ilaina manokana izany hitarihana ity indostria marefo ity aorian'ny fotoana aorian'ny COVID-19. Mila fitarihana matanjaka sy vola be izany.